Swing Copters 2 iri kuuya svondo rinouya | IPhone nhau
Swing Copters 2 Kubva kuMusiki WeFlappy Shiri Kuuya Svondo Ino
Unoyeuka Flappy Shiri here? Sokunge kuti uchikanganwa. Mutambo une 8-bit giraidhi uye madhiraivhu zvakashata zvekuti zvakaita kuti tide kukanda yedu iPhone, iPad kana iPod kumadziro ari padyo, kana akareba, kuti itore kumhanya uye kupedzisira yoputsika zvachose. Musiki waro, Dong Nguyen, akapedzisa kubvisa mutambo, akadaro, nekuti aisakwanisa kutsigira budiriro yaakaunzwa nayo neshiri yake diki. Nguva pfupi yapfuura, Swing Copters akauya, mutambo unotsamwisawo kuti svondo rino ichave neshanduro nyowani paApp Store, Swing Copters 2.
Swing Copters 2, senge yekutanga vhezheni, uchave mutambo mahara nekushambadzira. Izvi zvinoreva kuti pese patinofa, isu tichaona yekushambadzira banner kumusoro, sezvaungaona mune yechitatu skrini pamusoro pemitsara iyi. Nguva nenguva, isu tinogona kuzowona chizere-chiziviso kushambadzira mushure mekudonha helikopta yedu. Chero zvazvingaitika, pachave nemukana wekubvisa kushambadzira uku pamwe nekutenga kwakabatana kwe € 0.99.
Chii chinosiyanisa Swing Copters 2 kubva pane yekutanga vhezheni? Chaizvoizvo mavara. Patino fambira mberi tichaenda kuvhura mavara matsva. Imwe neimwe ichave nehunyanzvi hwakasiyana, chimwe chinhu chauchanzwisisa zvirinani kana ukatamba mitambo yemotokari, midhudhudhu kana mamwe marudzi emarudzi uko mota yega yega ine kutonga, kumhanyisa, kumhanya, nezvimwe Muzviitiko izvi, zvakanakisa kusarudza hunhu hunokodzera kugona kwedu, asi zvine musoro kuti zvive nyore kutamba nevatambi vakaoma kuwana.
Pasina kupokana, iyi gadziriso ichave inogamuchirwa kune vateveri veSwing Copters (kana iinavo…), asi ini ndichiri kufunga kuti Dong Nguyen anofanira kurodha Flappy Bird yake kudzokera kuApp Store, mutambo wakazvitanga zvese uye kuti vazhinji isu ticha kuda kuve neyedu iPhone isina jailbreak.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Swing Copters 2 Kubva kuMusiki WeFlappy Shiri Kuuya Svondo Ino
Mashandisiro ekushandisa akawanda WhatsApp maakaundi pane iOS pasina Jailbreak
Spotify zvinangwa "Star Wars" fever nemumhanzi